Wasiirada Arrimaha Debadda IGAD oo ku shiraya Muqdisho & Amaanka oo la adkeynayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wasiirada Arrimaha Debadda Urur Goboleedka IGAD ayaa la filayaa iney todobaadka soo socda shir ku yeeshaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa durba bilowday qorshaha lagu xaqiijinayo amaanka caaismadda, ka hor qabsoomidda shirka IGAD ee Muqdisho..
Waxaa la qorsheeyey in la xiro wadooyinka muhiimka ah iyo kuwa ku dhow goobta shirka lagu qaban doono. Wadooyinka la xirayo waxaa ka mid ah wadada Maka Almukarrama, iyo wadada garoonka tagta, waddooyinka mara hareeraha madaxtooyada.
Amaanka Muuqdisho ayaa ah mid soo hagaagaya inkastoo ay weli ka dhacaan weeraro ay fuliyaan Alshabaab, waxaana horay Muqdisho u yimid madaxweynaha Tyrkiga Rajab Dayib Erdogan iyo Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-moon.
Booliska Faransiiska oo baahiyey sawirada rag looga shakisam yahay xasuuqii Charlie Hebdo